Yintoni uyilo? Yinto enokusinceda ebomini bethu | Izidalwa ezikwi-Intanethi
1 Yintoni uyilo? Yinto enokusinceda ebomini bethu.
2 Uyilo kufuneka luhlangabezane neenjongo ezithile
2.1 Umyalezo kufuneka ucace
3 Dlala ngamagama
Yintoni uyilo? Yinto enokusinceda ebomini bethu.
Umbuzo onokuthi uvelise iingxoxo ezininzi kunye neendawo zokujonga okoko Abantu abaninzi babona uyilo njengoko wenza umtshana wam ngePC yakhe emva kwemini okanye loo powusta yeminyhadala yedolophu, inyani kukuba uyilo lukhulu okhethekileyo kufunyanwa phantse kuzo zonke iinkalo zobomi bethu. Ngaba uyazi ukuba ulwabiwo lwe izixeko zenziwe ngoyilo? Umbutho, injongo kunye nokusombulula iingxaki zezinye zezinto zokuziphatha.
Uyilo lufuna sombulula iingxaki ngokubuza isisombululo Ukukhangela eyona nto isebenzayo ukusuka kwindawo yokujonga (kwiimeko ezininzi) apho idibanisa ukuyila kunye nezinto zethiyori, ukulawula ukwenza iziphumo ezinomtsalane kwizihlandlo ezininzi. Fumanisa ukuba uyilo lusinceda njani ekusombululeni iingxaki ezininzi zemihla ngemihla ngezisombululo ezinobuchule.
Uyilo olukude kunoko uninzi lucinga ayisosisombululo somzobo apho igcisa / umyili uveza izimvo kwiipowusta, amakhadi kunye nazo zonke iintlobo zosasazo kodwa yinto ekhethekileyo edlula into esinokuyicinga. Singatsho ukuba uyilo luvela njengemfuno yomntu, isidingo sokusombulula iingxaki ngendlela enengqiqo, kuba uyilo ngokuchanekileyo, kukukhangela izisombululo kuzo zonke iintlobo zeengxaki. Singatsho ukuba xa sicinga ngendlela esi-odola ngayo ukuhanjiswa kwendlu yethu senza uyilo kuba sihlengahlengisa indawo yethu ngendlela yokuba sikwazi ukufikelela kwisiphumo esisebenzayo, umzekelo ukusetyenziswa kwesithuba.
Un Ityala elisebenzayo lokuqonda ngcono ukuba yintoni uyilo Kukubona ngomzekelo osinceda ukuba siyibone ngcono (ukuphakamisa esi sikimu sele kuyilo). Masiyicinge loo nto Sifuna ukuhlala endlwini yethu kodwa asinandlela ngenxa yayo, ngenxa yeso sizathu sicinga ngesisombululo kwingxaki yethu, kule meko esona sicelo silula fumana isitulo esifanele oko sikufunayo kwimeko yethu. Kule meko siyakudinga isitulo seplastikhi kuba ngaphandle siyokumelana ngcono nemozulu, ikwafuna ukunganyangeki ukuze ikwazi ukumelana nazo zonke iintlobo zabantu kwaye kufuneka ibonakale inobuhle ukuze ikholise iliso. Ukuze sibe nesihlalo esivumelanayo nayo yonke le nto kuye kwafuneka senze uluhlu lwezinto ezifunekayo ukuze usihlalo wethu afezekise eyona njongo iphambili, kule meko ukuze sisebenze njengesihlalo esingaphandle sabantu.
Uyilo kufuneka luhlangabezane neenjongo ezithile
Lonke uyilo kufuneka ukuhlangabezana noluhlu lweenjongo kwaye ujonge iziphumo ezizezona zilungileyo ziyilelweyo kuba Kulilize ukuyila isitulo ukuba awukwazi ukuhlala kusoNgaphandle kokuba injongo yesihlalo ayikokuhlala kuso kodwa kukuyijonga, ukuba kunjalo, iyakuba izalisekisa injongo yayo kuba injongo yesosihlalo yayingekuko ukusebenza njengesihlalo kodwa yayikukuhombisa. Idlalwa phakathi kokubonakalayo kunye nokusetyenziswa Ukujonga iindlela ezifanelekileyo zokufikelela kwinjongo yezinto.
Xa sihamba esitratweni sibona ukuba zonke iintlobo ze ifanitshala yasezidolophini eyilelwe iinjongo ezahlukeneyo, yonke ifanitshala kufuneka ibe nomtsalane kwaye iluncedo kubasebenzisi ukuphucula ubomi bomntu wonke, nokuba lifutshane kakhulu a Uyilo lwendalo iphela zilungelelaniswe nazo zonke iintlobo zabantu. Izitalato, iinkqubo zothutho lukawonkewonke, ukuhanjiswa kwezinto kunye nezinye izinto ezininzi esizifumana kubomi bethu bemihla ngemihla esitratweni zenziwe zisebenzisa uyilo njengesixhobo. Ukuba sifuna ukubona umzekelo olungileyo woyilo lweedolophu kufuneka sityelele isixeko saseBarcelona, Izitalato zayo kunye nokusasazwa kwayo kuyilo olusulungekileyo.
Uyilo olusuka kwintengiso / kwindawo yokujonga lusebenzisa ngokuchanekileyo njengoko sibonile kumzekelo wesihlalo, Intengiso ibangela ingxaki kwaye uyayisombulula ngandlela thile ngokusebenzisa imifanekiso yokubhengeza.
Umyalezo kufuneka ucace
Uyilo olulungileyo lunxibelelana, luhambisa kwaye luhlangabezana neenjongo ngokufanelekileyo, ngenxa yeso sizathu intengiso ngumzekelo olungileyo wokubhekisa kusetyenziso loyilo njengeendlela zoku ukufikelela kwiziphelo ezithile esinqumayo. Intengiso ihlala ifuna dlulisa izimvo ezazichazwe ngaphambili ngemifanekiso kunye nazo zonke iintlobo zosasazo lweendaba.
Kwinqanaba loluntu Uyilo lwentengiso yentlalontle lunokuba ngumlingani olungileyo kuba ukuba sifuna ukwenza "Sihlalo esihle" ngamanye amagama umyalezo olungileyo, kufuneka sinemibono ecacileyo kwangaphambili ukufikelela kwiinjongo zethu. Namhlanje zikho amaphulo amakhulu entengiso Apho sibona kubonakala zonke iintlobo zamaxabiso adluliselwe ngomzobo. Intengiso ayisebenzi kuba iyile kodwa ngenxa yokuba iinjongo zichaziwe ngaphambili, akunamsebenzi ukuba nentengiso yokuqamba ukuba inkampani yethu ithengisa izitulo ...
Kude nemibuzo malunga neenqobo ezisesikweni zentengiso, ukusetyenziswa kunye nobungxowankulu, sifumana intengiso yesixhobo esinamandla kakhulu sonxibelelwano ukusombulula iingxaki zazo zonke iintlobo.
Akuthandabuzeki unxibelelwano lunxibelelene noyilo kuba injongo yentengiso kukudlulisa ngokucacileyo. Kwimizekelo yemifanekiso sinokubona kuqala Ukusetyenziswa gwenxa koyilo Ewe, umyalezo awucaci, kwelinye icala, kumfanekiso wesibini sibona ngokucacileyo umbono ofuna ukuwudlulisa. Ngokuqinisekileyo ngumbuzo ekufuneka sizibuze wona ngaphambi kokwenza naluphi na uhlobo lwentengiso.
Umfanekiso wokuqala awucacisi umyalezo umntu afuna ukuwudlulisa, endaweni yoko umfanekiso wesibini ngumzekelo woyilo olulungileyo Icacisa ngokucacileyo injongo (yokuthengisa ibhiya).
Ukuba sijonga ngokusondeleyo konke Uyilo lwentengiso (uyilo olulungileyo) luhlala lubonisa ngokucacileyo into ofuna ukuyidlulisa ukudlala nazo zonke iintlobo zezixhobo zemizobo. Intengiso inokudlala ngamagama, ngeentsingiselo, ngeemvakalelo, ungadlala ngayo yonke into ngendlela echuliweyo kodwa uhlala ubulela kuyilo lwangaphambili olwenza amathambo alo angabonakaliyo kumsebenzisi.
Uyilo luya kuhlala lubakho ngandlela thile kuzo zonke iinkalo zobomi bethu kuba iphakathi ayingomsebenzi olula apho indima yomyili ikhoyo dlala ngengqiqo kunye nokuyila okuninzi buscando sombulula ingxaki ngokwahlukileyo. Zininzi iingcali kwihlabathi loyilo oluthethileyo malunga noyilo kunye neenjongo zalo, ukuba unomdla wokufunda okungakumbi malunga noku, ungabukela le vidiyo ilandelayo.
Ukuba ukhona unomdla kuyilo lwentengiso kwaye ungathanda ukubona ezinye izingqinisiso ezininzi zeeprojekthi zakho zexesha elizayo ungabona ezi zikhombisi zilandelayo:
Imizekelo engama-60 yentengiso yoyilo kwiPinterest.
Intengiso kunye nonxibelelwano kwiPinterest.
Intengiso yoyilo lwentlalo
Uyilo lwendalo iphela
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Yintoni uyilo? Yinto enokusinceda ebomini bethu